သဒ္ဓါလှိုင်း: လွင့်မျောနေတဲ့ တိမ်နဲ့အတူ...
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:09 PM
သဒ္ဓါရေ.....တခါတလေမှာ လူတွေဟာ သဏ္ဍန်လုပ် သရုပ်ဆောင်နေကြရတာလေ။ ကိုယ်မယုံကြည်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလိုက်အထိုက်နေရတယ် ဆိုသလိုပေ့ါ။ အလိုက် အထိုက်နေထိုင်းရင်း ဒီလိုပဲ ဘ၀ကို ရွက်လွှင့်နေကြရတယ် သဒ္ဓါရေ...။
“ အတ္တသာ ကြီးစိုး နေမယ် ဆိုရင် မတူတာတွေ……. မတူတာတွေကို……. တူအောင် ညှိယူဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး။ ”
အဲဒီ“အတ္တ”..ဆိုတာကြီးကိုက ဖျောက်နိုင်ဖို့ တော်တော်ခက်နေတာ...
“စိတ်” ကိုထားတတ်အောင် ကြိုးစားရင်း...
တိမ်တွေစီးပြီး ဘယ်သွားမလို့လဲဗျ။ ဦးမာဃကို တွေ့ရင် ပြောလိုက်ပါဦး။ သတိရတယ်လို့။
မတူတာတွေကို ညှိဖို့ မကြိုးစားတဲ့အတွက်
တူအောင် ညှိဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်
ကိုဏီလင်းကတော့ တူတာတွေ လိုက်မရှာချင်တော့ဘူးဗျာ...။
ရင်ဘတ်ချင်းတူသူတွေကိုတွေ့ဖို့က တစ်ကယ်တော့ ခဲယဉ်းလွန်းတယ်ဗျ...။ အဲ့ဒါကိုယ်တွေ့လေ....း)
တူတာတွေတောင် မတူတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်လေတယ် ညီမလေးရေ
ဟင်းးးးးးးးးးး.....သဒ္ဓါရေ...အရာရာကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ဖို့ တူတာတွေဖြစ်လာအောင်ညှိယူဖို့ဆိုတာ ပင်ပန်းလွန်းအားကြီးလှတယ်လို့ အင်ကြင်းတော့ထင်တယ်...ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် တစ်ခါတစ်လေကျ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေကအများသား...အဲဒီတော့လည်း ညှိမနေချင်တော့ပါဘူး...ဒီလိုပဲ လိုက်လျောညီထွေနဲ့ အားလုံးကိုအကုန်မဟုတ်တောင် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းပေါ့....